IIMPUNGUTYE ZEFLEET: UKUHLOLWA KWEALBHAMU YEFLEET FOXES - IINDABA
Ukulandela okumangalisayo Ilanga elikhulu I-EP, i-Seattle esekwe kwi-Fleet Foxes 'yobude obugcweleyo inezinto ezininzi zokuphila. Ngethamsanqa, ingaphezulu kokuhambisa iimpahla: Ukudibanisa uluhlu olubanzi lweendlela- ukusuka kwilizwe laseAppalachian kunye nelizwe le-AM ukuya kwilitye eliqhelekileyo kunye ne-SoCal pop- I-Fleet Foxes yenza ukuhlanganiswa komculo woontanga babo, abazali babo, kwanabo umakhulu notatomkhulu.
Iimpungutye zeFleet zinokuqonda ngokuqinileyo kwimbali yamatye kunye nembali, kodwa azikaze zidlale kwingqokelela yazo. Endaweni yokuvuselela indawo ethile okanye ukuphinda wenze isandi esilahlekileyo, i-Seattle quintet iconge izimvo zabo kwizitayile ezibanzi, ukutsala abantu baseAppalachian, ilitye leklasikhi, ilizwe le-AM kunye ne-SoCal pop ukwenza ubumbano lomculo oontanga babo, abazali babo kwanootatomkhulu noomakhulu babo.
Ibhendi ayishiyanga idolophu ukurekhoda Iimpungutye zeFleet , kodwa kuvakala ngathi ibinokurekhodwa naphi na e-United States- Austin, Minneapolis, Chicago, Brooklyn, Louisville, okanye ekucoceni amahlathi. Oko kungabi nasikhala kubandakanya ukusebenza ngokukuko, kuthathelwa ingqalelo ukuba iSeattle ibe yindawo yomnye umculo phantse iminyaka engamashumi amabini. Ezi ziqwenga zintlanu zingene kakuhle kuloo ndawo: Amanqanaba abo abandakanya amalungu angoku kunye nawangaphambili eCrystal Skulls, uPedro Ingonyama, kunye noNqabileyo. Ngapha koko, ukuvelisa iiseshoni ezenze ifayile ye- Ilanga elikhulu EP kwaye le LP yokuqala, baqesha uPhil Ek, owaziwa kakhulu ngomsebenzi wakhe neModest Mouse, eyakhelwe ukuPhalaza, kunye neeShins. Nangona kunjalo, ezabo zifundiswa ngobugcisa basemaphandleni, zijonga iimpembelelo zasezidolophini kwaye zisebenzisa i-reverb njenge-sepia-toni ukucebisa ngento endala kakhulu kwaye engaphezulu kunokuba injalo. Eli cwecwe livula ngengoma emfutshane (ebizwa ngokuba 'yiRed squirrel' xa kuqala ukuvuza kodwa ingadweliswanga kwiCD) enokuba yingxelo eshicilelweyo eyaculwa libandla ledolophu encinci kwiminyaka engama-50 eyadlulayo. Isingenisa kwihlabathi lakudala leFleet Foxes; emva kwemivalo embalwa, le ngoma iya kwi-heraldic 'Ilanga Iyaphuma', eqiniseke ngokwaneleyo ukuba iyavakala njengengcinga yomntu yokuphuma kwelanga phezu kwentaba ehlala iluhlaza. Kodwa ayikenziwa okwangoku: Kanye njengoko ingoma iphela, inyukela kwindawo ekhuselekileyo ejonga izinto ezimbini ezingaphezulu kwesandi sabo- isigulana esigulayo sikhotha 'kwiiNtaba zeBlue Ridge' kunye nezandi ezihambelana nemibala efaka imibala kwiingoma ezininzi irekhodi. Yonke into elahlekileyo ziingceba kunye neemposiso ze-LP endala. (Ngethamsanqa, iSub Pop iyikhupha kwivinyl.
Oku kulandelayo kuyamangalisa kwaye kugcwele ngokubanzi, phantse ngokufana nomzobo waseBruegel owenza isiciko sealbham. Isigingci sikaSkye Skjelset sihamba naphina apho sithanda khona, ngelixa igubu uNicholas Peterson egcina iingoma zitshekisha, evumela iqela ukuba lihambe ngokukhululekileyo kodwa lingazulazuli kakhulu ehlathini. Imbande, egalelwe isiqingatha kumxube, yongeza isoyikiso sokungqengqa kwelona cwecwe le-albhamu, 'uMkhuseli wakho', kunye nesingqisho sepiyano sikaCasey Wescott sibaleka 'kwiiNtaba zeBlue Ridge', sonyusa umfutho wekhorasi.
Kuzo zonke iindlela ze-albhamu ezijikelezayo kunye ne-vistas ezingalindelekanga, iiFleet Foxes 'ezingqinelanayo zihlala zisisiqalo sokuqala, kwaye zibhalile kwaye zilungiselele ezi ngoma ukubonisa amazwi abo ekwabelwana ngawo. 'Babeve Bakhuthaza' abanamazwi, kodwa kunzima ukuyibiza ngokuba sisixhobo. Ngokuchasene nesandi sokungqubana nesingqungqo, 'I-Ragged Wood' itshintsha phakathi kwezwi likaRobin Pecknold kunye nezikhonkwane zebhendi emva kwevesi nganye, ukuguqulela ngokufanelekileyo ilitye leklasikhi ngokusebenzisa izinto zabantu. Kukho iFleetwood Mac eninzi njengeBhendi kwisiphelo sokugqibela sengoma. Kwelinye icala, iFleet Foxes iyazithintela ngokunjalo: 'Ingoma yeTiger yeNtaba yeNtaba' inesigingci esisodwa kunye nesandi esinamandla sikaPecknold, esiguqula kwi-fosetto ekhohlakeleyo ngaphandle.
Izandi zidlala indima ephambili kumculo weFleet Foxes kangangokuba amazwi kaPecknold ngamanye amaxesha avakala ngathi yindlela nje yokuhambisa izinto ezingqinelanayo, kubhekiswa kwiindunduma, ukuphuma kwelanga, kunye nemifudlana yomeleza imimandla yasemaphandleni. Nangona kunjalo, ezi ekugqibeleni ziyinyani ngononophelo kwaye ziyilwe kakuhle. Kwi-'White Winter Hymnal ', umlilo ojikelezayo obonisa eyona ndlela idlalwe ngayo ibhendi, amazwi ahambisa okungaqhelekanga, phantse umfanekiso kaEdward Gorey:' bendilandela ipakethi / Bonke baginyiwe kwiidyasi zabo / Ngezikhafu ezibomvu zibotshwe ' Umqala wabo / Ukugcina iintloko zabo ezincinci zingawi kwikhephu / Ndaye ndaguquka 'ujonge apho uya khona.' Ngubani owaziyo ngokuthe ngqo ukuba athetha ukuthini la magama, kodwa ingozi yentsomi iza ngombala opheleleyo, kunye nokubetha kukaPeterson phantsi komgangatho kunye nokuntsonkotha kweempawu zebhendi kususa isoyikiso ngaphandle kokungxengxeza imfihlakalo.
Iimpungutye zeFleet iphela ngo-'Oliver James ', enye iphantse ibe ngumboniso we-cappella wezwi likaPecknold. Njengokuba ebetha isingqisho esithambileyo kwi-acoustic yakhe kaMartin, ucula malunga neetafile ezenziwe ngezandla kunye nootatomkhulu abadala, bebhomboloza ikwayara 'u-Oliver James, wahlamba emvuleni / akasekho.' Isifinyezo esifutshane 'se-Red squirrel' kunye 'nelanga liyaphuma' siyakumema ukuba ungene kwiFleet Foxes 'bt, kodwa u' Oliver James 'akakukhuphi emnyango. Endaweni yoko, iFleet Foxes ikuvumela ukuba ulinde eminye imivalo embalwa, ujonge phambili ekubambeni isilayidi sokugqibela sikaPecknold njengoko siphelela emoyeni. Kubonakala ngathi abafuni ukuba irekhodi liphele ngokungaphezulu kunokuba uya kuthanda.
URosalia uthando olubi
iiwindersticks kwigumbi lokulinda
Iifowuni eziphathwayo ezingenazingcingo
nethuba le rapper-uhlala ongatshatanga